China Ukukhanya kwesibhedlele esiPhezulu esiPhezulu esiPhezulu esiPhezulu kunye neziQinisekiso ze-CE kunye nabathengisi | Wanyu
Ukukhanya kwesitalato se-LED esingaphantsi kwe-700/700
I-LEDD500 / 700 ibhekisa kukukhanya kwesibhedlele esibhedlele kabini se-dome.
Isibhedlele sokukhanya kwezonyango esibhedlele senziwe ngealuminium aluminium enepleyiti engqindilili yealuminium ngaphakathi, eluncedo kakhulu ekutshisweni kobushushu. Ibhalbhu yibhalbhu yeOSRAM, tyheli namhlophe. Iscreen sokuchukumisa iLCD sinokulungisa ukukhanya, ubushushu bombala kunye neCRI, zonke ezihlengahlengiswayo kumanqanaba alishumi. Ingalo ejikelezayo isebenzisa ingalo ye-aluminium engasindiyo ekubekeni ngokuchanekileyo. Zintathu iindlela onokukhetha kuzo kwiingalo zentwasahlobo, ezifanelekileyo kumagumbi okusebenza aneebhajethi ezahlukeneyo. Unako kwakhona ukunyusa ulawulo lodonga, inkqubo yokugcina ibhetri, eyakhelwe-ngaphakathi kwikhamera kunye nokubeka iliso.
1. Ukhanyiso olunzulu
Ukukhanya kwezonyango esibhedlele kuye kwabola ngokuphantse ngama-90% emazantsi endawo yotyando, ke ukukhanya okukhulu kuyadingeka ukuze kuqinisekiswe ukukhanya okuzinzileyo. Ukukhanya kwesibhedlele esibhedlele kabini kunokubonelela ukuya kuthi ga kwi-160,000 yokukhanyisa ukuya kuthi ga kwi-1400mm yokukhanya.
2. UkuSebenza ngokuSimahla kweShadow
Eyahlukileyo kwabanye abavelisi abathenga iilensi ezilula, sityala imali eninzi ukwenza iilensi ezizodwa ezinokusebenza okungcono kokujija. Ukwahlula ii-bulbs ze-LED kunye neelensi zayo, yenza indawo yokukhanya. Ukugqagqana kwemitha yokukhanya eyahlukileyo kwenza indawo yokukhanya ifane ngakumbi kwaye kunciphise kakhulu izinga lesithunzi.
3. Iphaneli yokuLawula iScreen esisebenziseka lula
Ubushushu bombala, ukukhanya kwezibane kunye nesalathiso sombala sokukhanya kwesibhedlele kungatshintshwa ngokulandelelana ngepaneli yolawulo lweLCD.
4. Ukuhamba ngokukhululekileyo
Indibaniselwano yendalo iphela engama-360 ivumela isibhedlele ukukhanya kwintloko yonyango ukuba ijikeleze ngokukhululekileyo ejikeleze i-axis yayo, kwaye ibonelele ngenkululeko enkulu yokuhamba kunye nokukhetha okungabekelwanga ndawo kumagumbi asezantsi.
5. Amandla aziwa ngokuTshintsha kombane
Zimbini iintlobo zamandla ethu okutshintsha izinto, ngaphandle kweziqhelekileyo, ukusebenza okuzinzileyo kuluhlu lwe-AC110V-250V. Kwiindawo apho umbane ungazinzanga ngokugqithisileyo, sinikezela ngombane ngokubanzi ngokunika amandla amandla okulwa nokuphazamiseka.
6. Lungiselela ukuSebenzisa kwixa elizayo
Ukuba ufuna ukuphucula ukukhanya kwekhamera kwixa elizayo, ungasazisa kwangaphambili, kwaye siza kwenza amalungiselelo okulungisa kwangaphambili. Kwixesha elizayo, ufuna kuphela isibambo ngekhamera eyakhelweyo.
7. Ukhetho lwezinto ezikhethiweyo zokukhetha
Inokuxhotyiswa ngekhamera eyakhelweyo kunye nokujonga, ipaneli yokulawula udonga, ulawulo olukude kunye nenkqubo yokuxhasa ibhetri.
Egqithileyo Ukukhanya kwesitalato se-LED kunye nokuKhanya okuKhanya
Okulandelayo: I-DL500 Halogen esuswayo iLampu yoPhando kwiiVili
LEDD620620 yophahla LED Dual Dome Medical Opera ...
Ukuthengiswa okutsha kwe-LED kwe-LED
Ukukhanya Kwezitalato ze-LED ze-LED
Ukukhanya kweNdlela ye-LED yoBume boMdonga
LED D500 Uphahla-Onyuswe LED Single Dome Operati ...
Ukukhanya kweLampu yoLungiso lwe-LED